Farmaajo oo ka hadlay qaraxa ka dhacay Kismaayo | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Farmaajo oo ka hadlay qaraxa ka dhacay Kismaayo
Farmaajo oo ka hadlay qaraxa ka dhacay Kismaayo
Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiiranyo leh u diray qoyska, qaraabada iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Sheekh Cabdinaasir Xaji Axmed oo ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha ayaa xusay in Sheekh Cabdinaasir ahaa daaci weyn oo lafdhabar u ahaa fidinta diinta islaamka iyo ilaalinta caqiidada suubban ee ummadda Soomaaliyeed, waxa uuna Madaxweynuhu tilmaamay in falkaas arxandarrada ah uu ka marag kacayo sida ay argagixisadu duullaan ugu tahay diinta islaamka iyo nolosha haldoorka Soomaaliyeed.
“Innaa Lillaahi Wa Innaa Ilayhi Raajicuun. Waxaan ka tacsiyaynayaa geerida Alle ha u naxariistee Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo argagixisada cadowga ku ah jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ay ku dhishay magaalada Kismaayo. Sheekh Cabdinaasir waxa uu ahaa daaci weyn oo noloshiisa oo dhan u huray fidinta diinta islaamka.”
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Marxuumka Alle uga baryey in uu hoygiisa ka yeelo Jannatul Firdowsa, waxa uuna caafimaad degdeg u rajeeyey culimada iyo muwaadiniinta kale ee dhaawacu ka soo gaaray falkaas arxan darrada ah.
Farmaajo oo ka hadlay qaraxa ka dhacay Kismaayo was last modified: February 22nd, 2022 by warsan radio
Dhageyso:-SOMA oo Cambaareysay dhaawac loo gaystay wariye Ismaaciil Khaliifa
Kormeerihii Waxbarashada gobolka Shabeellaha Hoose oo la dilay